စေတနာ့ဝန်​ထမ်းဆရာဝန်​ လုပ်ပြီးကူညီဖို့အတွက်​ကို ဖောင်ဖြည့်လိုက်တဲ့ နန်းမြတ်ဖြိုးသင်း – Maythadin
May Thadin | September 23, 2020 | Celebrity, News | No Comments
မင်းသမီးချောလေး နန်းမြတ်ဖြိုးသင်းကတော့ အဆိုတော်အဖြစ်ရော သရုပ်ဆောင်အဖြစ်ပါ အနုပညာ အလုပ်တွေကို လုပ်ကိုင်ခဲ့သူလေး ဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်ထောင်ကျပြီး နောက်ပိုင်းမှာတောင် ကြော်ငြာလေးတွေ ရိုက်ကူးနေဆဲဖြစ်တဲ့ နန်းမြတ်ဖြိုးသင်းက သားလေးတစ်ယောက်
ပိုင်ဆိုင်ထားရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် နန်းမြတ်ဖြိုးသင်းက ဒုတိယမြောက် ရင်သွေးလေးဖြစ်တဲ့ သမီးလေးကိုပါ ကိုယ်ဝန်လွယ်ထားရတာ လေးလကျော်ရှိနေပြီလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်ထဲမှာပဲ မိသားစုနဲ့အတူ အေးချမ်းပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်နေတဲ့ နန်းမြတ်ဖြိုးသင်းက အခုလည်း
လေးစားချင်စရာကောင်းတဲ့ အလုပ်လေးတစ်ခုကို လုပ်ပြလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ Volunteer တွေ အများအပြားလိုအပ်နေတဲ့ အခုလို ကိုဗစ်ကာလမှာ နန်းမြတ်ဖြိုးသင်းက ဆရာဝန်တစ် ဦး ပီပီ တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေ ကူညီပေးနိုင်ဖို့ Form ဖြည့်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအလုပ်
ကတော့ Q စင်တာတွေကနေ သိလိုသမျှမေးမြန်းမှုတွေကို ပြန်လည်ဖြေကြားပေးရမှာဖြစ် ပြီး Work From Home လုပ်လို့ရတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းကို နန်းမြတ်ဖြိုးသင်းက ”ကိုယ်ကတော့ volunteer လုပ်ဖို့ form ဖြည့်လိုက်ပြီ။ ဆရာဝန်သူငယ်ချင်းတွေကို မျှဝေတိုက်
တွန်းပါတယ်။ Edit စိတ်မပူကြပါနဲ့နော် ကိုယ်ဝန်နဲ့ဆိုတော့ ပိုပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဂရုစိုက်ပါတယ်။ ဆရာဝန်တစ်ယောက်ဖြစ်တော့ ဒီလိုချိန်မှာ အရမ်းကူညီချင်နေတာပါ။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်က risk group ဆိုတော့ မလုပ်နိုင်ဖြစ်နေတာ ဒီ call center အလုပ်ကတော့ work from home
ဖြစ်လို့ အားတက်သရော ကူညီချင်တာလောသွားလို့ အားလုံးကို စိတ်ပူစေမိသွားတယ် တောင်းပန်ပါတယ်” ဆိုပြီး တင်ထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကဲ Volunteer လုပ်မယ့် နန်းမြတ်ဖြိုးသင်းရဲ့အကြောင်းကို ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် ပြန်လည်မျှဝေ ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
မငျးသမီးခြောလေး နနျးမွတျဖွိုးသငျးကတော့ အဆိုတျောအဖွဈရော သရုပျဆောငျအဖွဈပါ အနုပညာ အလုပျတှကေို လုပျကိုငျခဲ့သူလေး ဖွဈပါတယျ။ အိမျထောငျကပြွီး နောကျပိုငျးမှာတောငျ ကွျောငွာလေးတှေ ရိုကျကူးနဆေဲဖွဈတဲ့ နနျးမွတျဖွိုးသငျးက သားလေးတဈယောကျ
ပိုငျဆိုငျထားရတာ ဖွဈပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ နနျးမွတျဖွိုးသငျးက ဒုတိယမွောကျ ရငျသှေးလေးဖွဈတဲ့ သမီးလေးကိုပါ ကိုယျဝနျလှယျထားရတာ လေးလကြျောရှိနပွေီလညျး ဖွဈပါတယျ။ အိမျထဲမှာပဲ မိသားစုနဲ့အတူ အေးခမျြးပြျောရှငျစှာနထေိုငျနတေဲ့ နနျးမွတျဖွိုးသငျးက အခုလညျး
လေးစားခငျြစရာကောငျးတဲ့ အလုပျလေးတဈခုကို လုပျပွလိုကျတာ ဖွဈပါတယျ။ Volunteer တှေ အမြားအပွားလိုအပျနတေဲ့ အခုလို ကိုဗဈကာလမှာ နနျးမွတျဖွိုးသငျးက ဆရာဝနျတဈ ဦး ပီပီ တတျနိုငျတဲ့ဘကျကနေ ကူညီပေးနိုငျဖို့ Form ဖွညျ့လိုကျတာ ဖွဈပါတယျ။ ဒီအလုပျ
ကတော့ Q စငျတာတှကေနေ သိလိုသမြှမေးမွနျးမှုတှကေို ပွနျလညျဖွကွေားပေးရမှာဖွဈ ပွီး Work From Home လုပျလို့ရတာလညျး ဖွဈပါတယျ။ ဒီအကွောငျးကို နနျးမွတျဖွိုးသငျးက ”ကိုယျကတော့ volunteer လုပျဖို့ form ဖွညျ့လိုကျပွီ။ ဆရာဝနျသူငယျခငျြးတှကေို မြှဝတေိုကျ
တှနျးပါတယျ။ Edit စိတျမပူကွပါနဲ့နျော ကိုယျဝနျနဲ့ဆိုတော့ ပိုပွီး ကိုယျ့ကိုကိုယျ ဂရုစိုကျပါတယျ။ ဆရာဝနျတဈယောကျဖွဈတော့ ဒီလိုခြိနျမှာ အရမျးကူညီခငျြနတောပါ။ ဒါပမေယျ့ ကိုယျက risk group ဆိုတော့ မလုပျနိုငျဖွဈနတော ဒီ call center အလုပျကတော့ work from home
ဖွဈလို့ အားတကျသရော ကူညီခငျြတာလောသှားလို့ အားလုံးကို စိတျပူစမေိသှားတယျ တောငျးပနျပါတယျ” ဆိုပွီး တငျထားတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ကဲ Volunteer လုပျမယျ့ နနျးမွတျဖွိုးသငျးရဲ့အကွောငျးကို ခဈြပရိသတျတှအေတှကျ ပွနျလညျမြှဝေ ပေးလိုကျပါတယျနျော။
နအေိမျတိုကျခနျးမီးလောငျမှုဖွဈပှားခဲ့တဲ့ ဦးသိနျးတနျတို့အေးအေးခမျြးခမျြးရှိကွောငျးကို ပွောပွလာတဲ့ ဖွိုးမွတျအောငျ
???? ဂိမ်းဆော့ရင်း ရည်စားဖြစ်သွားတဲ့ ကောင်မလေးနဲ့တွေ့ဖို့ မြစ်ကြီးနားကနေ တာချီလိတ်ထိသွားတဲ့ ?? နှစ် သားလေးအဖြစ်
ကွယ်လွန်သွားတာရှစ်​နှစ်​ပြည့်​ခဲ့ပြီဖြစ်​သော ဖခင်ဖြစ်သူကိုသတိရလွမ်းဆွတ်ရင်း ဝမ်းနည်းစရာစာလေးတ​စောင်​အား ရေးသားဖော်ပြလာခဲ့တဲ့ နိုင်လူ